Mmekọrịta MonoX na StaFi. MonoX nwere obi uto ikwuwa na anyi na… | by Emmanuel Ramsey | Medium
MonoX nwere obi uto ikwuwa na anyi na ndi StaFi (Staking Finance) na-achikota onu mmiri. Mmekorita nke MonoX na StaFi ga-eweta oke mmiri ga-akacha nke ọma na tokens.
Usoro ihe eji egbochi mmiri na-emeghe akụ ndị ahụ
N’ime usoro proof-Stake, a chọrọ ndị na-egbochi ihe mgbochi iji kpochie ego ha nwere ogologo oge dịka ihe mkpuchi, akpọrọ ‘stake’ ha. Usoro a na-ewebata ọrụ iji mee ka ndị na-edu ọha na eze nwee nchebe na ahụike. Ihe ndọghachi azụ nke usoro ihe a bụ na a na-akwụ ụgwọ ọrụ, a naghị akwụ ndị akwụ ụgwọ ụgwọ dịka ha siri kwụrụ, ndị na — eso ya enweghị ike itinye ego, azụmaahịa ma ọ bụ osisi n’ebe ọzọ, na -echilata ohere ha nwere imepụta nkwụghachi dị elu na akụ ha. Nke a bụ ebe echiche Liquid Stacking na-abịa. Emepụtara usoro ndị dị na Tokenized nke na-eyi uru nke akụ mbụ ahụ, nke a na-ahapụ ka erere ya n’enweghị nsogbu, ebe ọ ka na-enweta ụgwọ ọrụ siri ike
Uru Mụrụ Token Liquidity na MonoX
Site na iji otu ọdọ mmiri a na-ahụ maka mmiri, anyị bụ ndị kachasị arụ ọrụ nke isi obodo iji weta mmiri mmiri na rTokens, na ihe nrịba ama ndị ọzọ na-akwadolarị. Nke a abụghị naanị imeghe mkpọchi akpọchiri, kama imeghe ikike iji rite uru na ihe ọ bụla i nwere ma ọ bụ nwee ohere. Ka ọtụtụ ụwa na-abawanye ma ọ bụ akụ dijitalụ na-enweta ego, MonoX bu n’obi ịbụ isi ihe na-ere ahịa ndị ‘Uru Backed Tokens’:
Synthetics (ejirila akụ ndị ejiri ya mee ihe)
A na-egosipụta ihe ndị na-eme ka ihe ndị ọzọ na-anọchi anya ihe ndị ọzọ na-abụkarị anụ ahụ, dị ka ọla edo, ala na ụlọ ma ọ bụ ebuka. Ihe nrịba ama ndị a ERC20 na-anọchite anya inwe, yabụ ị nwere ike zụọ ahịa ma ọ bụ bufee ya, na-enweghị mkpa ịmegharị akụ mbụ ahụ. Nke a dị oke mma maka azụmahịa na-enweghị oke.
NFTs nke nwere akụkụ (NFT n’onwe ya kwadoo): Echiche dị mfe, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inwe NFT, mgbe ahụ ha nwere ike ịkekọrịta ikike ahụ na ọtụtụ ndị ha chọrọ, na-eke irighiri ihe nke NFT. Cheedị echiche ịnwe iberibe ikike nke ọba kachasị ọhụrụ site na onye na-ese ihe kachasị amasị gị, na ị nwere ike zụọ ahịa na MonoX n’ogo ọrụ ha, na-enweta ego nloghachi na itinye ego gị.
Tokens tokens (nke akụ dị na mbụ kwadoo: Na egwuregwu NFT, uru ọ bụla dị na egwuregwu ahụ dị ka ngwa agha, nkwalite agwa, ịkọwa, nwere ike ịbụ NFT ma nwee ike ịzụta ya dị ka tokens na blockchain na MonoX
Tokens Insurance (nke ejiri akụ na — eji ya eme ihe): tokdị tokens ndị a na — anọchite anya mmadụ itinye aka na usoro mkpuchi mkpuchi na — ezighi ezi, na mgbakwunye na iwu na ụgwọ ịkwụ ụgwọ. Ego ndị sonyere na-eweta na-aghọ ọdọ mmiri a na-akwụ ụgwọ, yana n’ihi na ọ bụ ihe niile ka ọ dị na mgbochi ahụ, a na-eme nhazi ịkwụ ụgwọ na mgbanwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’otu ntabi anya.
Akụ a akụ na-eto eto nke ukwuu na 2021 ma ga-aga n’ihu na-abawanye. MonoX nwere ezigbo ihe ngwọta iji weghara ụdị uru ahụ ma nye nsogbu na-enweghị nsogbu, nke abụọ n’ahịa zuru ụwa ọnụ.
MonoX na-ewebata mgbanwe ego nke ndị isi ala, Monoswap. Ndị nwe ngo nwere ike depụta tokens ha na-enweghị ibu nke isi obodo ma lekwasị anya na iji ego maka iwu ihe owuwu ahụ kama ịnye mmiri mmiri.
Ọ na-arụ ọrụ site na ijikọ tokens n’ime ụzọ mebere ya na mkpụrụ ego vUSD kwụsiri ike, iji nye otu atụmatụ ọdọ mmiri.
MonoX ga-agbanwe usoro ihe ọkụkụ nke DeFi site na idozi enweghị isi obodo nke ụdị usoro ugbu a. Site na ego azụmaahịa dị ala, arụmọrụ nke isi obodo, yana ịmalite mgbapụta efu — MonoX ga-agbasawanye ikike nke DeFi.
Lelee n’okpuru maka ozi ndị ọzọ gbasara MonoX
Weebụsaịtị — http://monox.finance /
Discord — https: // bit.ly / MonoXD
Telegram — https: // t.me / MonoXOfficial
Ederede — https: // bit.ly / monoxdocs
StaFi bụ usoro DeFi wuru iji mepee oghere nke akụ ndị echekwara echekwa. Ndị na-ejide akụ ahụ na-akwụ ụgwọ site na nkwekọrịta ụlọ ọrụ wuru na StaFi protocol, ma nata akara aka a na-akpọ ‘rTokens’ na nloghachi, dịka rETH, rATOM, rDOT, wdg. rTokens nwere otu uru ahụ dị ka akụ mbụ ahụ, enwere ike ịre ahịa kpamkpam, ma nwee ike ịnweta otu ụgwọ ọrụ siri ike site na mgbochi mbụ. StaFi ga -emepụta ọdọ mmiri maka rTokens ha n’elu ikpo okwu, na-enye ndị ọrụ ha ụzọ ka mma isi na-azụ ahịa ma na-enye mmiri mmiri.
Telegram Chat: https: // t.me / stafi_protocol
Nkwupụta Telegram: https: // t.me / stafi_ann
Discord: https: // discord.com/invite / jB77etn
Nzukọ: https: // Commonwealth.im / stafi